Ibsa Eegdota Warraaqsa Oromiyaa (EWO) – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooIbsa Eegdota Warraaqsa Oromiyaa (EWO)
Wareegama sodaannee weerara halagaa barootaaf keessummeessa baane ofirraa qolachuu fi furmaata waaraa fiduu hin dandeenyu. Gadaa gadadoo fi daboo diinota keenyaa waggoota hedduuf ofirraa ittisnee fi wareegamni nuti baasaa turre wareegama of jiraachisuuti malee kan bilisummaa keenya dhugoomsee walabummaa biyya keenyaa utubuu dandahu hin turre.
Dura dhaabbannoo hin tuffatamne taasisnee humna diinaa bakkayyuutti salphisaa akka har’a geenye beekamaa dha. Haa tahuu malee of jiraatchisnee akka sabaatti har’a gahuuf gahee gumaache ni qaba. Sochiin keenya tartiiba qabaatee hanga dhumaatti deemee fiixa bahuurratti wareegama ishee maayiitti sodaa, shororkaa fi daldaltoota siyaasaa, ayyaana laallatoota fi harcootaan duubatti dhiibamnee harkifannaan mul’ate diinaaf aanjaa siyaasaa uumaa ture. Aarsaa lubbuu, wareegamaa fi of kenniinsaan guduunfamuun osoo irra jiruu injifannoolee warraaqsichaan argaman yeroo kamiyyuu caalaa tikfamee galii isaa gahuuf fala waaraa kan ta’u wareegamaa hadhooftuu dhaan ta’uu hubatamuu qaba.
Warraaqsa Galaana Ummata (WGU) guutummaa oromiyaa keessaatti dhoosuuf qophiin xumuramee jira. Odeeffannoo gola diinaa keessaa argameen warraaqsaa eegalamu kana gufachiisuuf mootummaan qophii shiraan guutamee diriirsee jirachuun hubatamaa dha. Haa ta’uu malee humna diinni qabuuf tooftaa dhimmaa bahamuu qabu xinxaluudhaan Warraaqsi Galaana Ummata yoo eegalame injifannoon akka goolabamuu waan itti amanameef miseensootni Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Ummatni Oromoo kallattii hundumaan wal faana hiriirree qabsoo akka finiinsinu wal hubachiisuun murtoo qabsoon gaafattuu dha.
Afanfaajjii caasaalee gidduutti uumameef dhiifama isin gaafachaa Warraaqsa Galaana Ummataa (WGU) dhoosuuf kallattii hundumaan qophii ta’uu ibsina.
Eegdootni Warraaqsa Oromiyaa (EWO)n Wareegama qabsoon gaafatu kaffalee weerara halagaa qolachuu fi furmaata Bilisummaa waaraa fiduuf murannoodhaan kanee jirra.
Raawwii Warraaqsa Galaana Ummata (WGU) bu’uuraalee armaan gadiin gageeffama.
Ganda irraa eegalamu keessatti waajjiraalee PP,Milishaa,poolisii fi dhimma nageenyaa banamu barbadeessuun caasaa ofii bakka buusuu.
Qabeenyaa fi meeshaa kuusaa waajjiraalee olitti ibsaman keessatti argaman dafanii dantaa qabsoof oolfachuu.
Ilmaan habashaa fi halagoota faallaa tahan ukkamsanii karaarraa dabsuu fi kanneen lammiilee Oromiyaa tahan of jala hiriirsuu.
Sochii kana gara aanaalee fi godinaaleetti ol guddisuun caasaa ofii diriirsuun kittillayyoota nafxenyaa Abbaa, Haadhaa fi fira kooti osoo hin jedhin dhabamsiisuu.
Qabxiilee olitti tarrifaman mara kan raawwatchiisu qaama Ajajaa Olaanaa ABO/WBO qofaan kan geggeeffamuu tahuu qaruuxeen hordofee hatattamaan rakkoo jiru gabaasuudhaan raawwatamuu qaba.
Qeerroon Bilisummaa Oromoo fincila WGU kana hordofeee galaanni Ummataa kun qaama dhimmi ilaaluun taligamaa jiraatchuu isaa gabaasaa deemuu fi waardiyyaa tahee argamuu qaba.
Eegdoota Warraaqsa Oromiyaa(EWO)